AMISOM oo xasuuqii shacabka ajanabigii gurmadka abaaraha ku dartey – SBC
AMISOM oo xasuuqii shacabka ajanabigii gurmadka abaaraha ku dartey
Ciidamada AMISOM ee ka socda midowga Afrika ee ku sugan magaalada Muqdisho ayaa caawa dhacdo argagax & anfiriir xambaarsan oo qodox ku noqon doonta hawlaha gurmad abaaraha Soomaaliya waxay ka geysteen Isgoyska KM 4 ka dib markii ay xasuuq u geysteen gaari ay wateen dhakhaatiir u dhalatey wadanka Maleysiya oo u yimid Soomaaliya gargaarka shacabka dhibaateysan ee Soomaaliya.
Ciidamada AMISOM ayaa rasaas ooda uga qaaday baabuur ay wateen dhakhaatiirta waxaana halkaasi ka dhacay dhimasho & dhaawac iyadoo sida dad goob joogayaal ah inoo xaqiijiyeen uu halkaasi ku geeriyoodey isla goobta mid ka mid ah dhakhaatiirka Maleesiya, sidoo kale waxaa dhaawac uu soo gaarey kuwa kale.
Baabuurka oo ah nooca raaxada ayaa waxaa la sheegay in ay gacantooda ku wateen dhakhaatiirta Maleesiyaanka waxaana la sheegay in ciidamada AMISOM aanay waxba waydiin baabuurka ay wateen dhakhaatiirta oo ay halmar rasaas ku afuufeen.
Goob jooge codsadey inaan magaciisa la xusin ayaa u sheegay SBC in xitaa ciidamada AMISOM markii ay falkaasi geysteen aanay goobta ugu imaan dadka dhaawaca ah iyadoo halkaasi goor dambe yimaadeen ciidamada dawlada KMG oo goobtaasi ka qaaday dadkii dhaawaca & dhimashada ahaa.
Talaabadan waxay wax weyn u dhimi doontaa hawlaha gurmad gargaarka & waliba safarada ajanabiga Muslim & Gaalba isagu jira ee u imaanaya Soomaaliya sidii ay ugu gurman lahaayeen shacabka Soomaaliyeed ee ay dhibaatadu abaaruhu waxyeeleeyeen.
Ciidamada AMISOM oo daafaca dawlada KMG waxaa tiro ka dhawr jeer lagu eedeeyey inay si arxan daran madaafiic ugu garaacaan goobo ay degan yihiin dad shacab ah, inkastoo ay ku doodaan in goobahaasi madaafiic looga soo rido.